BASDEC ee Iskaashiga cusub ee Difaaca iyo Duulista Hawada UK | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBASDEC ee Boqortooyada Midowday ee Wadashaqeynta Cusub ee Difaaca iyo Duulista
12 / 03 / 2020 16 Bursa, GUUD, cimilada, Gobolka Marmara, ISDIFAACA, TURKEY
basdec ee ingiriiska wadashaqeynta cusub ee difaaca iyo duulista
Difaaca Bursa Space Difaaca iyo Duulista Hawada (BASDEC), oo ka hoos shaqeeya dusha sare ee Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha, waxay ka soo qeybgashay shirkii wadahadalada laba geesoodka ah ee UK Roadshow 2020 iyo goleyaal ay soo qabanqaabiyeen waaxda ganacsiga caalamiga ah ee Wasaaradda Arimaha Dibadda Ingiriiska ee Manchester, Coventry, Oxford iyo London.
BTSO, oo ah urur saqafka ka ah ganacsiga adduunka ee Bursa, wuxuu sii wadaa hawlihiisa suuqyada dhoofinta cusub ee difaaca iyo duulista. BASDEC, oo isu keento shirkadaha Bursa iyo shirkadaha hormuudka ka ah difaaca iyo duulista ee hoos yimaada hoggaanka BTSO, waxay sii wadeysaa howlaha ay ka wado suuqyada dibedda iyada oo aan kala go 'lahayn. BASDEC, oo ka qaybqaadatay carwooyin aqoon leh iyo ururro B2B oo ku kala yaal qaaradaha kala duwan, ayaa waqtigan joogsi ka ahaa England. Kulamada ganacsiga ee laba geesoodka ah iyo goleyaasha ay soo qabanqaabisay waaxda ganacsiga caalamiga ah ee Wasaaradda Arimaha Dibedda ee UK, wuxuu ku bixiyay macluumaad ku saabsan dhaqaalaha Bursa iyo awoodaha wax soo saarka tikniyoolajiyada ee shirkadaha BASDEC.
Waxay leedahay abaabul waxtar leh
Madaxweynaha BASDEC Mustafa Hatipoğlu wuxuu sheegay in ay jiraan in kabadan 120 shirkadood oo kujira kooxda gudaheeda kana shaqeeya rugta ganacsiga iyo warshadaha Bursa. Hatipoğlu wuxuu cadeeyay in shirkaduhu ay kaqeybqaateen barnaamijyo cadaalad ah oo ka dhacay dalka Turkiga iyo dibeddaba inta ay gaarsiisan tahay heerka UR-GE iyo howlihii isku duubnida ee laga fuliyey hogaankii BTSO, iyo in barnaamijka UK, ee shirar muhiim ah ku leh difaaca iyo warshadaha duulista, uu ahaa mid wax ku ool ah. Hatipoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay in suurtagalnimada Bursa ee duullimaadyada duulista iyo difaaca la wadaago si faahfaahsan safarka ganacsiga England.
MADAXWEYNAHA BURSA IYO BASDEC EE OXFORD
Isagoo xusay in shirkadaha ka socda BASDEC ay soo mareen waddo dheer gaar ahaan dhanka difaaca iyo meelaha duulista, Hatipoğlu ayaa sii wadata, “Madalkeenu wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa tartankiisa qaybaha istiraatiijiyadeed ee Bursa, kaasoo khibrad wax soo saar u leh qeybaha kala duwan sida gawaarida, mashiinada iyo waaxda dharka. Intii lagu jiray booqashada Boqortooyada Ingiriiska anigoo ku hadlaya magaca BASDEC, waxaan bixinnay macluumaad ku saabsan meesha ay ku sugan yihiin shirkadaha BASDEC ee ku jira warshadaha difaaca Turkiga iyo horumarada 7kii sano ee la soo dhaafay. Iyada oo qayb ka ah barnaamijka, intii aan la kulannay shirkadaha ka socda qaybaha kala duwan ee waaxda gaashaandhigga iyo duulista, waxaan macluumaadka ku wadaagey annaga oo mataleyna BTSO iyo BASDEC guddigii lagu qabtay Oxford. Dalka UK, halka sidoo kale booqo barnaamijka Campus Hartwell, waxaan ka qeyb galay soo dhaweynta martigeliyay Ambassador of Turkey Umit Yalcin. Barnaamijyadan, oo wax ku ool u ah BASDEC, waaxdayada difaaca iyo duulista hawada oo sii wata hawlaheeda iyada oo hoos imaanaysa hoggaanka BTSO, way sii socon doontaa xilliyada soo socda. ”
Shirka Wadajirta Iskaashiga iyo Raadinta ee TCDD ee Qoyska
Dibad-baxayaasha UK ayaa riixa gawaarida tareenka si ay u taageeraan qaxootiga
Isbaanishka CAF waxay soo saartaa Tareenada Taqasuska ee England
Siemens Desiro City Tareenada si ay u iibsadaan UK
Ingiriiska oo khilaaf soo kala dhexgalay khilaaf soo kala dhexgalay